P Hollow Grid birao baord extrusion milina - China Qingdao Suke milina
PP Hollow Board Production Extrusion Machine Extruder Line milina Sava lalana: Ny PP lavaka birao pamokarana no fitaovana manokana ho an'ny extruding PC lavaka Grid board. Amin'ny mooth malefaka sy ambonin'ny madio, tsara tarehy tarehiny sy ny tsindry fanoherana. Plastic Hollow Grid Board Extrusion-dalana, dia be nampiasaina tamin'ny fanorenana, famonosana ary ny ravaka etc.The orinasa teknolojia ny lavaka taratasy ho faty amin'ny mpiara-extrusion fahana andian-tsoratra mba UV + PC + UV, UV + PC lavaka taratasy afaka mamonjy 30% UV amin'ny ...
PP Hollow Board Production Extrusion Machine Extruder-dalana,
Machine Sava lalana:
Ny PP lavaka birao pamokarana no fitaovana manokana ho an'ny extruding PC lavaka Grid board. Amin'ny mooth malefaka sy ambonin'ny madio, tsara tarehy tarehiny sy ny tsindry fanoherana. Plastic Hollow Grid Board Extrusion-dalana, dia be nampiasaina tamin'ny fanorenana, famonosana ary ny ravaka etc.The orinasa teknolojia ny lavaka taratasy ho faty amin'ny mpiara-extrusion fahana andian-tsoratra mba UV + PC + UV, UV + PC lavaka taratasy afaka mamonjy 30% UV amin'ny surface.
Machine dia ahitana:
Ity extrusion tsipika dia ahitana ny tokan-tena visy extruder, ketraka-paompy, hydraulic sivana fifanakalozana vondrona, hollow taratasy maty lohany, vacuum calibrating latabatra, aloha alainay eny milina, lafaoro, corona mitondra vondrona, hihena latabatra, faharoa alainay eny milina, trimming ary ny lavany-fanapahana vondrona nanorim-ponenana sy ny stacker sns
Extruder modely Φ100 Φ120
Product sakany 1300mm 2100mm
Product hateviny 2-10mm 2-10mm
Motor fahefana 110kw 132kw
Previous: PC Hollow Grid board extrusion milina
Manaraka: PP Building Endrika Board Production-dalana,
Plastic Hollow Board Extrusion-dalana
Mizarazara ho sosona nofon sombin-javatra PVC board pamokarana